Iyazethemba ngokufeza ekuyele eMorocco iPirates - Impempe
Iyazethemba ngokufeza ekuyele eMorocco iPirates
May 23, 2021 Impempe.com
Yaziqansisela yona i-Orlando Pirates kwiCAF Confederation Cup ngokuthi ivume ukubanjwa ngo 1-1 isekhaya ngempelasonto edlule. Manje iPirates seyihlalelwe wumqansa wokuzama ukuxopha iRaja Casablanca isingakubo. Lokhu ke akuyona into elula, kodwa ingenzeka.
Iqembu elizowina uma sekuhlanganiswe imiphumela ngemuva komdlalo yilo elizodlulela emdlalweni owandulela owamanqamu kulo mqhudelwano. Ukunqoba yinto okumele iyilwele ukunqoba le ndebe ngoba kubukeka kuyiyona kuphela indlela ezobuyela ngayo emidlalweni yasezwenikazi ngesizini ezayo.
Yize isenethuba lokufika endaweni yesithathu kwiDStv Premiership, lokhu nakho kungumqansa njengoba AmaZulu neGolden Arrows bengezwile nje. La maqembu aKwaZulu-Natal asekuvezile ukuthi nayo afuna ukuyozwa ukuthi kunjani ezwenikazi.
IPirates isendaweni yesine njengamanje kwiligi yakuleli ngamaphuzu angu-43 kanti isasele nemidlalo emine. Isangafika endaweni yesine uma ingayiwina yonke imidlalo esele bese AmaZulu ne-Arrows beqhuzuka.
Kodwa okubalulekile kuleli qembu njengamanje yilo mdlalo weRaja. Iphini lomqeqeshi kwiBucs, uFadlu Davids, uthe bahambe kahle futhi bazilungiselela kahle le eMorocco.
“Sihambe kahle kakhulu. Sesibe neziqephu ezimbili zokuzilungiselela. Abadlali bazimisele. Siyakwazi okumele sikwenze, kumele sishaye amagoli,” kusho uDavids.
“Sizodinga abadlali babe sesimweni sokubhekana nomdlalo omkhulu futhi onzima. Kumele bangabe sebegxila kakhulu ekutheni sifuna igoli bese begcina benza amaphutha. Kodwa khona lapho kumele sihlasele ngoba yiyona kuphela indlela esizothola ngayo amagoli leyo,” kuchaza uDavids.
Previous Previous post: Ixolisa ngesenzo sokuthukwa kukaPitso ngabalandeli bayo iSundowns
Next Next post: BANGENILE!: Ingene sekuvalwe amehlo iRoyal AM kwiPremiership